အလုပ်သစ်ပြောင်းချင်တဲ့အခါ ဒီမေးခွန်းလေးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါ – For her myanmar
အလုပ်သစ်ပြောင်းချင်တဲ့အခါ ဒီမေးခွန်းလေးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါ
Posted on May 22, 2019 May 23, 2019 Author Sugar Cane	Comment(0)
မေးခွန်းတွေ အကုန်ဖြေပြီးမှ ပြောင်းဖို့ သင့်မသင့် ဆုံးဖြတ်ပါနော် 😎
အလုပ်အသစ်တွေမှာ ဘယ်ရာထူးတွေခေါ်နေလဲလို့ အလုပ်ခေါ်စာတွေ လိုက်ကြည့်ပြီး C.V တွေ ပို့နေမိပြီလား ယောင်းရေ… ဒါမှမဟုတ် တကယ်ပဲ အလုပ်ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေပြီလား ? ဒါဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဒီမေးခွန်းလေးတွေ မေးကြည့်ဖို့ လိုနေပါပြီနော်…
၁။ အပြောင်းအလဲလိုချင်ရုံ သက်သက်ပဲလား။
ဟုတ်တာပေါ့ အလုပ်သစ် ပတ်ဝန်းကျင်သစ် အပေါင်းအသင်းအသစ်တွေဆိုတာ ယောင်းစိတ်ကို နိုးကြားတက်ကြွစေတယ်လေ.. ဒါပေမဲ့ ဒီအတွက်သက်သက်နဲ့ပဲ အလုပ်ပြောင်းချင်နေတာလား ?
အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ဒီအပြောင်းအလဲက ကိုယ့် Career တစ်ခုလုံးအတွက် အကျိုးရှိတဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်လာမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်တိုးတက်မှုကိုထိခိုက်စေမယ့် အပြောင်းအလဲလားဆိုတာ သေချာစဉ်းစားသင့်ပါတယ်နော်။
Related Article >>> ဆုံးဖြတ်ချက် ကောင်းတစ်ခုကို ခိုင်ခိုင်မာမာချတတ်စေဖို့ အဓိက လျှို့ဝှက်ချက်(၄)ခု
၂။ အလုပ်အသစ်မှာ လက်ရှိအလုပ်က ပြဿနာတွေ ပြေလည်သွားမှာလား။
အလုပ်အသစ်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုတာ လက်ရှိအလုပ်မှာ အဆင်မပြေတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်လူကြီးက မကောင်းတာ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက အဆင်မပြေတာ၊ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ အလုပ်တွေကို ခိုင်းကြတာ စသဖြင့်ပေါ့။
ဒီပြဿနာတွေက ကိုယ့်ကို တကယ်ပဲ ဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ ပြောင်းသင့်တာအမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်အသစ်မှာလည်း ကိုယ်မသိနိုင်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ အခက်အခဲတွေ၊ ပြဿနာတွေက စောင့်ကြိုနေချင်နေမယ်ဆိုတာကိုလည်း မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။
၃။ အလုပ်အသစ်က ယောင်းတို့တိုးတက်မှုကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် နေရာမျိုးလား။
ယောင်းဘဝ နဲ့ အလုပ်တိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ့်သူက ယောင်းကိုယ်တိုင်ပဲလေ။ တစ်ဘက်မှာလည်း ကိုယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာက ကိုယ့်တိုးတက်မှုအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ယောင်းကို အသိပညာတွေပေးနိုင်မယ့် အလုပ်ခွင်မျိုး၊ ရာထူးတွေတစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်မြင့်သွားမယ့် နေရာမျိုး၊ အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးစားချင်စိတ်တွေ ရှိနေမယ့်နေရာမျိုးပေါ့။
၄။ အလုပ်အသစ်က လက်ရှိနေရာထက် သာလွန်နိုင်လား။
ဖြစ်တတ်တာက ယောင်းလုပ်နေတဲ့နေရာမှာ လစာတိုးဖို့ခက်နေတာ၊ ရာထူးတိုးဖို့ခက်နေတာမျိုးပေါ့။ ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်တော့ တိုးပေးမှာပါ ဆိုတာတွေကလည်း တကယ်ဖြစ်မလာဘူးလေ။
အဲ့ဒီအခါ အလုပ်အသစ်မှာတော့ လခပဲဖြစ်စေ၊ ရာထူးပဲဖြစ်စေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အတိုင်းအတာမျိုးကို ရနိုင်တယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဒီလို အပြောင်းအလဲမျိုးဆိုရင် စွန့်စားကြည့်ဖို့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ထိုက်တန်နေပါပြီ။ တိုးလာမယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်တော့ အသင့်ပြင်ဆင်ထားပေါ့နော်။
အခု အက်ဒ်မင်ပြောပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေက ယောင်း တို့ရဲ့ အလုပ်ခွင်ဘဝ တိုးတက်ပြောင်းလဲရေးအတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ရင်း….
References: medium, forbes
မေးခှနျးတှေ အကုနျဖွပွေီးမှ ပွောငျးဖို့ သငျ့မသငျ့ ဆုံးဖွတျပါနျော 😎
အလုပျအသဈတှမှော ဘယျရာထူးတှခေျေါနလေဲလို့ အလုပျချေါစာတှေ လိုကျကွညျ့ပွီး C.V တှေ ပို့နမေိပွီလား ယောငျးရေ… ဒါမှမဟုတျ တကယျပဲ အလုပျပွောငျးဖို့ဆုံးဖွတျပွီး ပွောငျးဖို့ကွိုးစားနပွေီလား ? ဒါဆို ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဒီမေးခှနျးလေးတှေ မေးကွညျ့ဖို့ လိုနပေါပွီနျော…
၁။ အပွောငျးအလဲလိုခငျြရုံ သကျသကျပဲလား။
ဟုတျတာပေါ့ အလုပျသဈ ပတျဝနျးကငျြသဈ အပေါငျးအသငျးအသဈတှဆေိုတာ ယောငျးစိတျကို နိုးကွားတကျကွှစတေယျလေ.. ဒါပမေဲ့ ဒီအတှကျသကျသကျနဲ့ပဲ အလုပျပွောငျးခငျြနတောလား ?
အဲ့ဒါဆိုရငျတော့ ဒီအပွောငျးအလဲက ကိုယျ့ Career တဈခုလုံးအတှကျ အကြိုးရှိတဲ့အပွောငျးအလဲဖွဈလာမလား၊ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျ့တိုးတကျမှုကိုထိခိုကျစမေယျ့ အပွောငျးအလဲလားဆိုတာ သခြောစဉျးစားသငျ့ပါတယျနျော။
Related Article >>> ဆုံးဖွတျခကျြ ကောငျးတဈခုကို ခိုငျခိုငျမာမာခတြတျစဖေို့ အဓိက လြှို့ဝှကျခကျြ(၄)ခု
၂။ အလုပျအသဈမှာ လကျရှိအလုပျက ပွဿနာတှေ ပွလေညျသှားမှာလား။
အလုပျအသဈပွောငျးခငျြတယျဆိုတာ လကျရှိအလုပျမှာ အဆငျမပွတောကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ကိုယျ့လူကွီးက မကောငျးတာ၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေ အဆငျမပွတော၊ ကိုယျနဲ့မဆိုငျတဲ့ အလုပျတှကေို ခိုငျးကွတာ စသဖွငျ့ပေါ့။
ဒီပွဿနာတှကေ ကိုယျ့ကို တကယျပဲ ဒုက်ခပေးနတေယျဆိုရငျတော့ ပွောငျးသငျ့တာအမှနျပါ။ ဒါပမေဲ့ အလုပျအသဈမှာလညျး ကိုယျမသိနိုငျတဲ့ စိနျချေါမှုတှေ၊ အခကျအခဲတှေ၊ ပွဿနာတှကေ စောငျ့ကွိုနခေငျြနမေယျဆိုတာကိုလညျး မမပေ့ါနဲ့ဦးနျော။
၃။ အလုပျအသဈက ယောငျးတို့တိုးတကျမှုကို ဖျောဆောငျပေးနိုငျမယျ့ နရောမြိုးလား။
ယောငျးဘဝ နဲ့ အလုပျတိုးတကျရေးအတှကျ ကွိုးစားအားထုတျရမယျ့သူက ယောငျးကိုယျတိုငျပဲလေ။ တဈဘကျမှာလညျး ကိုယျအလုပျလုပျနတေဲ့နရောက ကိုယျ့တိုးတကျမှုအတှကျ အခှငျ့အလမျးတှေ ဖနျတီးပေးနိုငျတဲ့ နရောမြိုးဖွဈဖို့လိုပါတယျ။ ယောငျးကို အသိပညာတှပေေးနိုငျမယျ့ အလုပျခှငျမြိုး၊ ရာထူးတှတေဈဆငျ့ပွီး တဈဆငျ့မွငျ့သှားမယျ့ နရောမြိုး၊ အပွိုငျအဆိုငျ ကွိုးစားခငျြစိတျတှေ ရှိနမေယျ့နရောမြိုးပေါ့။
၄။ အလုပျအသဈက လကျရှိနရောထကျ သာလှနျနိုငျလား။
ဖွဈတတျတာက ယောငျးလုပျနတေဲ့နရောမှာ လစာတိုးဖို့ခကျနတော၊ ရာထူးတိုးဖို့ခကျနတောမြိုးပေါ့။ ဘယျနဘေ့ယျရကျတော့ တိုးပေးမှာပါ ဆိုတာတှကေလညျး တကယျဖွဈမလာဘူးလေ။
အဲ့ဒီအခါ အလုပျအသဈမှာတော့ လခပဲဖွဈစေ၊ ရာထူးပဲဖွဈစေ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ အတိုငျးအတာမြိုးကို ရနိုငျတယျဆိုရငျ အကောငျးဆုံးပေါ့။ ဒီလို အပွောငျးအလဲမြိုးဆိုရငျ စှနျ့စားကွညျ့ဖို့ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျ ထိုကျတနျနပေါပွီ။ တိုးလာမယျ့ စိနျချေါမှုတှအေတှကျတော့ အသငျ့ပွငျဆငျထားပေါ့နျော။
အခု အကျဒျမငျပွောပွခဲ့တဲ့ အခကျြတှကေ ယောငျး တို့ရဲ့ အလုပျခှငျဘဝ တိုးတကျပွောငျးလဲရေးအတှကျ တဈထောငျ့တဈနရောကနေ အထောကျအကူပွုနိုငျပါစလေို့ မြှျောလငျ့ရငျး….
Tagged ask, Career, change, Knowledge, New Job, questions
အမြဲလိုလို ရုံးနောက်ကျတတ်တဲ့ ယောင်းယောင်းတို့အတွက် ရုံးနောက်မကျစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းများ
Posted on February 20, 2019 Author Yin Sandi Ko
ဒီလို အချိန် စီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်…
Posted on May 18, 2018 July 25, 2018 Author For Her Myanmar
လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေတဲ့ ဗိုက်ဗိုက်လေးတွေ အတွက်…